Ndị na-emepụta èbè & ndị na-ebubata ihe - Ụlọ ọrụ China Sling Factory
Akpa ejiji ụmụ nwanyị sling kwa ụbọchị OEM & ODM
Akpa duffel ejiji kwa ụbọchị, ọmarịcha mma na nke siri ike, akwa akwa akwa 100%, zippers ụzọ abụọ nwere eriri zipa-puller, nwere obere akpa ime ụlọ, nwere otu eriri ubu - ogologo 120cm iji were na eriri abụọ na-ebu aka, 0.32KG dị fechaa. kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3001
Nha:12L * 6.5W * 6H inch
Ihe:100% owu akwa akwa
Agba:Ọcha, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Nkwakọ ngwaahịa:1pc n'ime a polybag na 30 PC n'ime katọn ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa Ejiji Ejiji kwa ụbọchị na ụdị Unisex
Akpa Ejiji Ejiji kwa ụbọchị, imewe siri ike, otu akpa ubu, ihe gburugburu ebe obibi, ngwa siri ike, dị mma iji were dị fechaa na ụdị ejiji, 0.20 KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3002
Nha:11.5L * 5.5W * 5.5H inch
Agba:Yellow, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
MOQ:50-500pcs kwa style kwa agba.
Nkwakọ ngwaahịa:1pc n'ime a polybag na 50 PC n'ime katọn ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa Tote nkwado anaghị kpara akpa
Akpa Tote nkwado anaghị kpara akpa, akwa akwa 80gsm anaghị kpara akpa, shei na-ebu eriri 2.Ihe gburugburu ebe obibi, nke ejiri eriri obe mechie, dị mma iji aka na-ebu.
Ihe No.LSD 3003
Nha:20L * 6 W * 15.5H inch
Ihe:akwa na-abụghị nke a kpara akpa
Nkwakọ ngwaahịa:1pc n'ime a polybag na 100 PC n'ime katọn ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Akpa Sling Messenger, nke ejiri ọrụ dị arọ 600D denier polyester mee, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ma na-adịgide adịgide.Ọ dị mma ma dị mfe iji aka were were otu eriri ubu were 0.30KG kwa ibe.
Ihe No.LSD 3004
Nha:7 L * 6.5 W * 12 H inch
Agba:Tan, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Nkwakọ ngwaahịa:70*50*60pcs, 30pcs/CN
Akpa Tactical Sling Chest Bag
Akpa igbe èbè, nke 600D dị arọ oxford w.Ugboro abụọ nke mkpuchi PVC, nke na-adịgide adịgide, na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ, akpa n'akụkụ nwere ike ịkwanye kettle mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla, tinye ya n'ụzọ dị mfe ma wepụ, n'ihu akpa 2 zipper na n'ime akpa 3, 0.3KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3005
Nha:7L * 4W * 12 H inch
Nkwakọ ngwaahịa:70*50*60cm, 100pcs/CN
Akpa Tactical USB Charging Sling Chest Bag
Akpa igbe èbè, nke 600D dị arọ oxford w.Ihe mkpuchi PVC ugboro abụọ, nke na-agaghị eyi na mmiri na-egbochi mmiri, akpa n'akụkụ nwere ike ibunye ketulu mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, tinye ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma wepụ ya.0.32KGS arọ kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3006
Nkwakọ ngwaahịa:60*50*40cm, 100pcs/CN
N'èzí Waterproof Sling Akpa OEM & ODM
Akpa sling mmiri na-adịghị n'èzí, nke 600D dị arọ oxford w.Ugboro abụọ nke mkpuchi PVC, nke na-adịghị eyi ma na-adịgide adịgide, na-eji akwa akwa akwa maka akwa ọ bụla, n'ime otu nnukwu akpa nwere ike ịkwakọ ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị.Ibu 0.22KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3007
Nha:7L * 4.3W * 10.2 H inch
Akpa Single Ubu Sling Akpa OEM & ODM
Ọ bụ akpa èbè otu ubu, 600D arọ oxford shei w.Ugboro abụọ mkpuchi PVC, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide, usoro ntinye site na eriri / eriri teepu bartacks / eriri eriri mpụga, zippers ụzọ abụọ nwere patch roba, 0.5KGS arọ kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3008
Nha:6.5L * 4.3W * 8.3 H inch
Akpa Ubu Nchaji USB nke ụmụ nwoke
Akpa USB na-ebunye akpa ubu, akwa ndị agha 600D - ọrụ dị arọ oxford w.okpukpu abụọ nke mkpuchi PVC, na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide.Akụkụ na oghere chaja USB maka ụgwọ mkpanaka, ịdị arọ 0.30KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3009
Nha:7L * 2W * 12 H inch
Nkwakọ ngwaahịa:60*50*40cm, 150pcs/CN
Ụzọ dị n'èzí sling akpa ukwu
Akpa sling ụzọ dị n'èzí, imewe dị nro na-arụ ọtụtụ ọrụ, onye ọ bụla bara uru nwere maka mpụga na eji kwa ụbọchị.3 obere akpa maka imewe dị nro na ikike eji eme ihe kwa ụbọchị, yana eriri ubu enwere ike ịpụpụ, eriri nchere na aka na-ebu eriri, 0.14KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3010
Nha:7.5L * 4W * 5H inch
Akpa ubu na-egbochi mmiri n'èzí
Akpa ubu anaghị egbochi mmiri, nke 600D dị arọ oxford w.Ugboro abụọ PVC mkpuchi, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide, 4 akpa - 1 n'ihu velcro akpa akpa mechiri emechi na 2 zipped akpa, na 1 n'akụkụ akpa nwere ike ịkwanye ketulu mmiri ma ọ bụ nche anwụ na-adaba adaba.0.3KG kwa ibe.
Ihe Nkeji:LSD 3011
Nha:8.5L * 4.7W * 9.8 H inch
Akpa igbe èbè dị n'èzí
Akpa sling nke dị n'èzí, ihe okike siri ike, ihe na-arụ ọrụ dị arọ na Oxford akwa na ngwa, nke nwere obere akpa abụọ a ga-eji kwa ụbọchị, Sistemụ nghọta siri ike, dị fechaa, bara uru ma dị mma ibu n'èzí, 0.43KG kwa otu.
Ihe Nkeji:LSD 3012